Técnicas Reunidas: rebound kana shanduko muitiro? | Ehupfumi Zvemari
Técnicas Reunidas: rebound kana shanduko muitiro?
Pfungwa zhinji pane chikamu chechikamu chakanaka chevanoongorora zvemari kuti pane zvikonzero zvakakwana zveinosarudzwa indekisi yeSpanish equities, Ibex 35, kuve pamusoro pe9.000 mapoinzi. Mupfungwa iyi, vanoratidza kuti zviitiko zvakaipisisa mumusika wemasheya zvatobviswa. Chinhu chakaomesesa kutsanangura kana kubvumidzwa kwemabhajeti akawandisa neItari kuchakamirira. Chinhu chikuru chekudzima shanduko yezvikamu zvemakambani akakosha mumusika wezvemari weEuropean.
Chimwe chinhu chinofanirwa kutariswa ndechekuti makambani akanyorwa anoratidza purofiti yakaderera mune inotevera bhizinesi mhedzisiro kupfuura kusvika ikozvino. Mupfungwa iyi, imwe yemakambani inoteverwa nevashambadzi vadiki nepakati iri pasina mubvunzo Técnicas Reunidas. Zvanga zva mumwe wevanonyanya kurangwa mumakore achangopfuura nekuderera kwekukosha kwayo kupfuura kukosha. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei kukoshesa kwayo kugona kungave kwakakwirira kubva zvino zvichienda mberi.
Huye, kunyangwe isina chimiro chakashomeka, ine nyeredzi mune yakakosha kudarika mukudzokorodza mumisika yenyika yekuenzana. Técnicas Reunidas yakatumira kuwedzera kwezuva nezuva kweanopfuura 3% svondo rapfuura, mushure mekugadzirisa mitengo yayo pasi zvakanyanya. Asi nhau dzakanaka kuvashambadziri avo vanoda kusarudza ichi chikumbiro chemusika wemasheya ndechekuti zvinzvimbo zvavo zvakasimbiswa nevamwe vevanonyanya kukoshesa vanoongorora zvemari mumusika wemasheya. Sezvo mune chaiwo kesi dze Morgan Stanley naJP Morgan avo vakasiyana maonero avo kukambani yeinjiniya.
1 Técnicas Reunidas pa22 euros
2 Target mitengo yakakwira kupfuura kukosha kwayo
3 Yakabatana nemutengo wemafuta asina kuchena
4 Maitiro izvozvi
5 Dzazvino bhizinesi mhedzisiro
6 Hunhu mukukosha
Técnicas Reunidas pa22 euros
Iwo masheya ekambani iyi yeIbex 35 parizvino ari panguva yakakosha mumutengo wavo. Nekuti mukati mesvondo rapfuura rakazokwanisa kudzoreredza iyo chikamu chemakumi maviri nemaviri euros pamugove. Iri rinenge riri danho rekutanga kusvika kumatunhu akakwirira, zvirinani kune rinotevera gore kana kunyangwe iro retsika rikagadzirwa nzombe rally zororo reKisimusi. Izvo hazvigone kukanganwika kuti haasati makore mazhinji apfuura kubvira kukosha kwayo kwanga kuri pamatanho ari pamusoro makumi matatu euros. Kuve, mune chero mamiriro ezvinhu, imwe yeanodiwa tsika nevanoongorora zvemari vakasiyana.
Iyi kambani, zvisinei, yakatanga ndege inozivikanwa yevatengi uye izvo zvakatungamira kuchinhu chekuti munguva pfupi chinenge chetatu chakasiiwa wekukosha kwako. Mune ino mamiriro akajairika, zvakakosha kuti utaure kuti kana kuwedzerwa kwemazuva ekupedzisira kuchiita rebound imwe chete uye hapana chimwe kana, nekusiyana, iko kwakakosha shanduko mune zvinoitika. Mune chero zviitiko zvacho, zvichave zvakafanira kumirira mazuva mashoma kuti uve nechokwadi chakazara nezve zviri kuitika nemazita avo panguva ino.
Target mitengo yakakwira kupfuura kukosha kwayo
Nhau dzakanaka dzevashambadzi vadiki nepakati dzinovakirwa pachokwadi chekuti mabhangi ataurwa pamusoro, nepo ivo vadzikisa mutengo wekambani, ichiri pamusoro pekukosha kwayo mazuva ano. Nekutarisa tarisiro yemutengo iyo oscillates pakati pe25 ne30 euros pamugove. Izvi zvinoreva kuti maTecnicas Reunidas masheya ane anonakidza kumusoro mukana. Kunyangwe iine yekudzokorodza pasi kwavakagamuchira kubva kuna Morgan Stanley naJP Morgan. Kusvika padanho rekuti vamwe vevatengesi vane hukasha mumusika vakatotora zvinzvimbo muukoshi hwekuita mari yavo vega.
Kusvika padanho rakakura, kuwedzera mumazuva achangopfuura kwakakonzerwa nekukwira kwemutengo wemafuta. Kunyangwe izvi muchikamu chekupedzisira chakadonha neinenge 3% semhedzisiro yeiyo marongero matsva mumutemo wekupa uye kudiwa mune ino inokosha yemari nhumbi. Nekuti chero chinhu chiri kuwedzera kwemutengo wemafuta asina kuchena chichave chinobatsira kwazvo kune zvido zvekambani yakanyorwa mune yakasarudzika indekisi yemusika wemusika wenyika. Uye zvese zvinoratidza kuti zvinoshanda zvakavanakira, zvinoenderana nekubhejera kwevanoongorora zvemari nekufungidzira kukuru mumisika yezvemari.
Yakabatana nemutengo wemafuta asina kuchena
Kuwa kwemazuva ekupedzisira kwakatorwa mushure me Sangano rePetroleum Exporting Nyika (OPEC) yakasimbisa kuti mumwedzi wapfuura kugadzirwa kwemafuta asina kuchena kwakawedzera. Hazvishamisi kuti kuvimba kwaTénicnicas Reunidas pane ino inozivikanwa mari yemari kuri kupfuura kukosha, sezvakaonekwa mumakore achangopfuura. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Nekuti zvave kubva pakuva imwe yemasimba makuru enzvimbo dzeSpanish equities kusvika pakuva chimwe chezvinoodza moyo zvegore rino izvo zvava kuda kupera.
Mupfungwa iyi, zviri pamutengo wekushomeka kwemusika uyu wezvemari uye izvo zvakonzera kuti parizvino uve wakakosha yepakati nepakati-refu kuramba ayo ari pamatanho e23 euros pane mugove wega. Kunze kwekuti kumwe kukwana kwakapfuurwa munzvimbo dzakanyanya padyo ne21,72. Izvi mukuita zvinoreva kuti inofamba iri pasi pekufamba kwakamanikana zvakanyanya maererano nekutenda kwemitengo yayo. Nechikonzero ichi, zvakaomarara kufungidzira kana zviri nani kupinda kana kubuda munzvimbo panzvimbo iyi yeIbex 35.
Chero zvazvingaitika, hapana mubvunzo kuti Técnicas Reunidas ndiyo imwe yenzvimbo dzakaomarara kwazvo kushanda mune ese mazwi akapiwa nekarenda: pfupi, yepakati nepakati. Pakati pezvimwe zvikonzero nei zvitsigiso uye zvinopesana vari panzvimbo dzisiri kure nemumwe. Kusvika padanho rekuti zviri nyore kwazvo kuita iko kusanzwisisika kukanganisa mune marongero aunogona kukudziridza kubva zvino zvichienda mberi. Nekusiyana pakati pemitengo yayo yepamusoro uye yepasi yakakwira kwazvo uye mune chero zvipi zvingave zvakakwirira pane izvo zvinopihwa nemamwe maitiro emusika wenyika unoenderera.
Kune rimwe divi, mhedzisiro yekota zvabuda zvekambani izvi zvinopa chenjedzo ndiyo dhinomineta yezvizhinji zvako nzira dzekudyara. Hazvishamise kuti ivo vanowanzo kuve vakasiyana kwazvo kubva kune imwe kota kuenda kune imwe, chimwe chinhu chisingaitike mune mamwe makosi emasheya akataurwa neSpanish equities Nepo pane izvo zvinopesana, mikana yekukanganisa ndeyechokwadi, sezvo inogona kupupurira kune chikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Mune maviri ezviitiko zvakakura zvehunyanzvi zvakapihwa neimwe yemakambani einjiniya muhupfumi hweSpain.
Dzazvino bhizinesi mhedzisiro
Nezve razvino ruzivo rweveruzhinji rweiyi kambani, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti chimwe chezvinhu zvakakosha ndeicho chinoratidza kuti kambani iyi inopa kuderera kwakakosha mubhenefiti inopfuura 90% mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore, zvine chekuita nenguva yakafanana gore rapfuura. Chimwe chezvinhu zvinokonzeresa izvi zvinoodza moyo mhedzisiro zviri nekuda kweiyo mari mhedzisiro, Izvo zvinonyanya kukonzerwa nekuderera kwakasimba kweiyo lira yeTurkey uye izvo zvakakanganisa kuti aya epakati ekumhara haana kugonesa misika yemari.
Kune rimwe divi, hapana zvishoma zvinoodza moyo zvave zviri izvo gross inoshanda purofiti (Ebitda) uye kuti munguva ino yakamira pamamirioni makumi mana nemakumi mashanu nemashanu. Izvi, mukuita, zvinoreva kuti yakadonha ingangoita 43,5% kana ichienzaniswa nenguva imwechete muna 60. Kunyangwe zvakadaro, mari yayo yasvika pamamirioni 2017, 3.256% yakaderera pane panguva yapfuura yakaongororwa. Mune chero zviitiko zvacho, idzi idata rakadonha zvakanyanya mumisika yequity nemadonhwe anotevera ekukosha. Kusvika padanho rekuve pane imwe yematanho epasi mumakore achangopfuura.
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe umo vaongorori vazhinji vanobvumirana uye ndiko kuti iyi kambani ine kukosha maererano ne yepakati nepakati. Mupfungwa iyi, kucheka kunogona kushandiswa kutora zvinzvimbo mukutarisana neaya mahedheni. Uine mukana unoyemurika uye ndiko kuti mashandiro anogona kuitwa pamutengo unokwikwidza kupfuura pakutanga. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe izvozvi isiri mune yakanakisa yematanho ayo ekutora. Nekuti haugone kukanganwa kuti yaive imwe yemabheti emusika wemasheya anosarudzwa nevamiriri vezvemari.
Kubva nemaonero aya, Técnicas Reunidas inofanirwa kushandira kuichengeta pane radar yekushanda segore rinotevera. Nekuti chero nguva iwe unogona kutangazve kumusoro kumusoro kusati kwaonekwa kwezvibvumirano zvitsva muhurumende yeinjiniya mumakore mashoma anotevera. Saka mutengo wako wekukwikwidza unogona kusimudzwa kubva panzvimbo dzako dzazvino. Kunyangwe iine zvitsigiso zvine simba pamberi payo izvo zvinogona kudzora kukwirisa kwayo kusvika kumusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Técnicas Reunidas: rebound kana shanduko muitiro?
Mutemo wekushanduka kwemamiriro ekunze wakanyorwa sei pamusika wemasheya?